म अस्पतालमै सकिन्थें; नइले बचायोः शताब्दी पुरूष | Hamro Patro
नइ नभए शायद म मरिसक्थें होला पनि ! केही वर्षअघि नै म झन्नै सकिएको थिएँ । मलाई नइले बचायो । मलाई बचाउन नइले नै पहल गर्यो । त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम मलाई बचाउन लाग्नु भयो । गौतमकै सक्रियता मेरो जीवनरक्षाको विषय बन्यो ।
नेपाली साहित्यिक सङ्घसंस्थाले गर्नुपर्ने र अरूको सोचमा नआएका धेरै नै कामहरु नइ प्रकाशनले गर्दै आएको छ । सरकार र सरकारले बनाएका प्रज्ञा-प्रतिष्ठानलाई उछिनेर नइले नै साँस्कृतिक र साहित्यिक काम गरिरहेको छ । पाँच वर्षका बालबालिकादेखि नेपालका विविध क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको थप उचाई अभिवृद्धिका लागि नइले हर प्रयासबाट काम गर्दै आएको छ । नइ प्रकाशनले नेपाली प्रतिभा र प्राज्ञको मात्र कदर गरेको छैन; यस संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विशिष्ट प्रतिभाको पनि कदर र सम्मान गर्दै आएको छ ।
नइले मेरो जीवनलाई थप उचाइ दियो, मेरो मर्यादा बढाउने काम नइबाटै भयो । नइले नै मलाई शताब्दी पुरूष बनायो । नइकै सौजन्यमा त्रिमूर्ति निकेतनले पाँच लाख रुपैयाँ राशि राखेर म जतिक्कै अग्लो ताम्रपत्र प्रदान गर्यो । नइ र त्रिमूर्ति निकेतनले मलाई शताब्दी पुरूष बनाएपछि नै नेपाल सरकारले वाङमय शताब्दी पुरूषको उपाधि प्रदान गर्यो । अब मलाई मेरो जीवनमा केही चाहिंदैन, पुग्यो । म पूर्ण भएँ ।
नइ नभए शायद म मरिसक्थें होला पनि ! केही वर्षअघि नै म झन्नै सकिएको थिएँ । मलाई नइले बचायो । मलाई बचाउन नइले नै पहल गर्यो । त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम मलाई बचाउन लाग्नु भयो । गौतमकै सक्रियता मेरो जीवनरक्षाको विषय बन्यो । गौतमकै सदिच्छाका कारण तत्कालीन सरकारले वयोधा अस्पतालमा लागेको मेरो उपचारको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्यो । त्यतिखेर सरकारले भीआइपी कक्षमा राखेर मेरो उपचार गरेको थियो । त्यसै बखत सरकारले अस्पताललाई १३ लाख रूपैयाँ निकास गरिदियो ।
स्रष्टा बचाउने संस्था हो- नइ ! मलाई प्राणदान दिने संस्था हो- नइ ! नइले मलाई शताब्दी पुरूष बनाएपछि इज्ज्तका लागि पनि मैले अरू एक वर्ष त बाँच्नै पर्ने भएको छ; म बाँच्छु पनि ।
(स्मरण रहोस् राष्ट्रकवि पनि नइको नै परिकल्पना हो । कविवर माधव घिमिरेलाई पनि नइको पहल र निवेदनमा राज्यले राष्ट्रकविको उपाधि प्रदान गरेको थियो।)
[ नइ पुरस्कार समर्पण समारोह : २०७५ वैशाख ३० गते शताब्दी पुरूष डा.सत्यमोहन जोशीको भाषणको सारसङ्क्षेप ! सोही दिन नइ प्रकाशनले शताब्दी पुरूष डा.जोशीको ९९ औं जन्मोत्सव मनाएको थियो। ]